Waa maxay sharciga CAN-SPAM? | Martech Zone
Waa maxay sharciga CAN-SPAM?
Xeerarka Mareykanka ee ka hadlaya farriimaha email-ka ganacsiga waxaa nidaamiyay 2003-dii iyadoo la raacayo Guddiga Ganacsiga Federaalka ee 'CAN-SPAM Act'. In kasta oo ay toban sano ka badan tahay ... weli waxaan u furaa sanduuqgeyga maalin walba email aan la weydiisan karin oo leh macluumaad been ah iyo qaab aan uga bixi karin labadaba. Ma hubo sida wax ku oolka ah ee xeerarku u ahaayeen xitaa iyadoo loogu hanjabayo illaa $ 16,000 oo ganaax ah xadgudub kasta.
Waxa xiisaha lihi, Sharciga CAN-SPAM uma baahna rukhsad uu emayl ugu diro sharciyada fariimaha ganacsiga ee wadanka kale aasaasay. Waxa ay u baahan tahay ayaa ah in qaataha uu xaq u leeyahay inuu kaa joojiyo emaylkooda. Tan waxaa loo yaqaanaa habka ka bixitaanka, sida caadiga ah lagu bixiyo iyada oo loo maro iskuxirka ka saarida liiska oo lagu daray salka hoose ee emaylka.
Tani Hagaha bilowga ah ee CAN-SPAM Act oo ka socda EverCloud waxay ku siin doontaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ogaato si loo hubiyo inaad u hoggaansan tahay sharciga.
Shuruudaha Muhiimka ah ee Sharciga CAN-SPAM:
Ha u isticmaalin macluumaad madax been ah ama marin habaabin ah. Your "Ka," "Ku," "Reply-To," iyo macluumaadka wadada - oo ay ku jiraan magaca domain asalka ah iyo cinwaanka emailka - waa in ay noqdaan kuwo sax ah oo aqoonsanaya qofka ama ganacsiga bilaabay fariinta.
Ha isticmaalin khadadka maaddooyinka khiyaanada leh. Khadka maadada waa inuu si sax ah uga tarjumaa nuxurka fariinta.
Aqoonsiga fariinta ad. Sharcigu wuxuu ku siinayaa xoriyad badan sida loo sameeyo tan, laakiin waa inaad si cad oo muuqata u muujisaa in fariintaadu tahay xayeysiin.
U sheeg kuwa helaya meesha aad ku sugan tahay. Fariintaadu waa inay kujirtaa cinwaankaaga cinwaanka boostada oo sax ah. Kani wuxuu noqon karaa cinwaankaaga hadda ee dariiqa, sanduuqa boostada ee aad ka diiwaangashan tahay Adeegga Boostada Mareykanka, ama sanduuqa boostada ee gaarka loo leeyahay ee aad ka diiwaangelisay wakaaladda qaabilista boostada ee lagu aasaasay xeerarka Adeegga Boostada
U sheeg qaatayaasha sida ay uga baxaan ka-helitaanka emaylka mustaqbalka adiga. Farriintaadu waa inay ku jirtaa sharraxaad cad oo muuqata oo ku saabsan sida qofka qaataha ah uu uga bixi karo inuu email ka helo adiga mustaqbalka. Ku farsamee ogeysiiska hab u fudud qofka caadiga ah inuu aqoonsado, wax u akhriyo, una fahmo. Isticmaalka hal abuurka leh ee cabirka nooca, midabka, iyo goobta ayaa hagaajin kara hufnaanta. Waxaad siisaa cinwaanka emaylka soo celinta ama qaab kale oo sahlan oo ku saleysan internetka si dadka loogu oggolaado inay kula soo xiriiraan xulashadooda. Waad abuuri kartaa menu si aad ugu oggolaato qaataha inuu ka baxo noocyada farriimaha qaarkood, laakiin waa inaad ku dartaa ikhtiyaarka ah inaad joojiso dhammaan farriimaha ganacsi ee adiga kaa imanaya. Hubso in shaandhadaada spam aysan xannibin codsiyadaan ka bixitaanka.
Xushmee codsiyada ka bixitaanka si dhakhso leh. Farsamayn kasta oo bixitaan ah oo aad bixiso waa inay awood u leedahay inay socodsiiso codsiyada ka-bixidda ugu yaraan 30 maalmood ka dib markaad dirto farriintaada. Waa inaad ku sharftaa codsashada ka-bixiyaha qaataha 10 maalmood oo shaqo gudahood. Kama dalbi kartid lacag, uma baahnid qaataha inuu ku siiyo macluumaad shakhsiyadeed oo aqoonsi ah oo ka baxsan cinwaanka emaylka, ama aad ka dhigto qofka qaata inuu qaado tallaabo kasta oo aan ka ahayn soo diritaanka jawaab celinta ama booqashada hal bog oo bogga Internetka ah oo shardi u ah codsi ka bixid Mar alla markii dadku kuu sheegaan inaysan rabin inay kaa helaan farriimo dheeri ah, ma iibin kartid ama wareejin kartid cinwaankooda emailka, xitaa qaab liis gareyn ah. Waxa kaliya ee ka reeban ayaa ah inaad u wareejin karto cinwaanada shirkad aad kireysatay si ay kaaga caawiso u hogaansanaanta sharciga CAN-SPAM.
La soco waxa dadka kale magacaaga ku sameynayaan. Sharcigu wuxuu caddeynayaa xitaa haddii aad kireysato shirkad kale inay ka shaqeyso suuqgeynta iimaylkaaga, qandaraas kama bixin kartid mas'uuliyaddaada sharci ee ah u hoggaansanaanta sharciga. Labada shirkadood ee badeecadoodu kor u qaaddo farriinta iyo shirkadda sida dhabta ah u dirta farriinta labadaba waxaa laga yaabaa inay mas'uul ka yihiin sharci ahaan.
Hubinta inaad u hoggaansameyso sharciyada 'CAN-SPAM' waa tallaabada ugu horreysa ee laguugu soo dirayo emaylladaada iyada oo loo marayo shaandhaynta emaylka iyo sanduuqa macaamiishaada. U hoggaansanaanta CAN-SPAM micnaheedu maahan in iimaylkaagu uu ka dhigi doono sanduuqa sanduuqa, in kastoo! Weli waad ku qori kartaa liiska oo waa lagaa xiri karaa, ama toos baa loogu diraa galka qashinka iyadoo kuxiran samatabbixintaada, sumcaddaada, iyo meelaynta sanduuqaaga. Waxaad u baahan doontaa qalab dhinac saddexaad sida 250ok taas!
Tags: karaa spam falkaraa-spamfariin ganacsiguddiga ganacsiga ee federaalkaftcjoojintafilter spamganaaxyada spammacaamiisha isweydaarsiga lacagahaadeegga boostadawaa maxay ficilka-spam